Ọrịa coronavirus butere mbibi na ahịa igwe na akụnụba gburugburu ụwa, n'ime ọnwa isii mbụ nke 2020. Ọnọdụ akụ na ụba China bụ onye izizi tara ahụhụ n'ihi nsogbu mkpọchi metụtara Covid-19. Ihe mmepụta ihe nke mba ahụ dara, na February nke afọ a. Otú ọ dị, a qu ...
Prefabricated ígwè Ọdịdị ụlọ na-ejikarị na ogbako, nkwakọba, na ụfọdụ Ugboro kpọkọtara Ọdịdị. Steel Ọdịdị ụlọ eji ígwè Ọdịdị dị ka isi ihe, isi ibu-ebu mmiri na-agụnye ígwè kọlụm, ígwè doo, ígwè Ọdịdị ntọala na ígwè struc ...
Chineselọ ọrụ akpa ụdị ejiji nke China
https://www.qdxmzt.com/uploads/flat-pack-container-office.mp4 Omenala ụdị akpa ejiji nke China.Pee ọrụ pụrụ iche n'efu. Ọnụ ego otu bụ $ 1900 kwa otu.
Echichi amalitela mbadamba igwe na ụlọ ọrụ ọhụrụ nke ụlọ ọrụ anyị. Ekele m na ihe niile na-aga nke ọma. https://www.qdxmzt.com/uploads/e56714e8e3efec254bc7ec59586729f5.mp4
Ngwa ụlọ na-ebu obere ngwa ngwa maka ụlọ ọrụ maka ogige ndị ọrụ yana MCC （ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwe eji arụ ọrụ nke China Ltd.） na-abịaru mmecha.
A na-eziga ụlọ nkwakọba ihe ígwè na Papua New Guinea
Ntinye nke ihe eji edozi ụlọ nkwakọba ihe nke dị na East Timor amalitela.
Factorylọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ anyị na-etinye
Factorylọ ọrụ mmepụta ihe ọhụrụ anyị malitere ịwụnye. Ọhụrụ facotry bụ maka prefab ígwè Ọdịdị na akpa ụlọ. Mmadụ Bịa na ileta anyị factory na akara. #prefabsteelstructure #steelstructure #prefab
Okwu Mmalite: China Railway akwụkwọ ngo, gụnyere 260 PC nke 20-ụkwụ obere akpa ụlọ, maka ndị ọrụ n'ụlọ obibi na ọfịs, echichi oge bụ otu ọnwa. Aha aha: Constructionlọ ọrụ na-ewu ụlọ na ebe obibi nke Engineeringlọ Ọrụ Na-ahụ Maka Engineeringlọ Ọrụ Beijing maka ụlọ ọrụ New Campus nke Hengshui Col ...
Ihe nkpuchi efu maka ịzụta
Ka ọ dị ugbu a, ihe nkpuchi, ọgwụ, disinfection na mgbochi ọrịa metụtara ya na ihe ọgwụgwọ na-adịkarị n'ụwa. Fọdụ ụlọ ọrụ na ndị ọrụ enweghị ike ịzụta ihe nkpuchi, Anyị niile maara nke ọma nje virus na ụbọchị ndị a. Anyị na-atụ anya na ihe niile na-aga nke ọma na nje ahụ na-aga ...
Ọsọ megide oge - Wuhan Huoshenshan Hospital gwụchara na ụbọchị 10
site ha na 20-03-04
Kedu ihe bụ Wuhan Huoshenshan Hospital? Ọ bụ nnukwu ọrụ nke e mechara n’ime ụbọchị iri na abalị iri. Ọ bụ olileanya nke ndị ọrịa niile butere ya, ọ bụkwa ọrụ ebube n’akụkọ ihe mere eme nke ndị ọrụ ahụike! Karịrị 1,000 akwa na a na-ewu ebe nke 34,000 square mita e n'ezie dechara site m ...
Rịba ama Ememme Afọ Ọhụrụ ndị China
Biko mara na ụlọ ọrụ anyị ga-apụ nwa oge maka ezumike Afọ Ọhụrụ ndị China site na Jenụwarị 20 ruo Jenụwarị 31, 2020. Anyị nwute maka nsogbu ọ bụla ọ nwere ike ịda. Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla, biko nweere onwe gị ịkpọ + 86156 ...
Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ anyị gara Algeria
site ha na 20-01-02
Ndị nnọchi anya ụlọ ọrụ anyị bụ Steven gara leta ndị ahịa anyị na Algeria ma nwee nsọpụrụ ileta Dr. Ruana, onye ama ama ama ama ama Algeria. xinmao ígwè Ọdịdị, ndị ọkachamara ígwè Ọdịdị ， akpa ụlọ na ọkụkọ ụlọ soplaya. Anyị dị njikere ịkwalite mmekorita akụ na ụba b ...
2 Senior Welders nwere asambodo AU ka a kpọrọ ka ọ gwụchaa ụlọ ndị ebuputere AU
site ha na 19-11-20
E zigara ụlọ nkwakọba ihe ndị e doziri ngwa ngwa na East Timor
Nnyocha nyocha maka Papua New Guinea ígwè arụ ọrụ bench
site ha na 19-10-22
Officelọ ọrụ a na-ewu ewu na-ewu
Ndi edere aha maka onyinye ntughari 2019
site ha na 19-08-14
2019 World Architecture Awards The Structural Awards, nke ụlọ ọrụ nke Structural Engineers bidoro na 1968, na-amata ọmarịcha ụkpụrụ ụlọ na ihe okike wee gosipụta arụmọrụ injinịa kachasị ala n'ụwa taa. Ọ bụ 51st n’afọ a. Akụkọ ihe mere eme ...
Ihe Ngosiputa Ngosipụta Ihe———— shop steel steel
site ha na 19-07-19
Nigeria Steel Structure Okuko House Show
Project List Gosi Nigeria Steel Structure okuko House Area: 5400㎡, Construction oge: 10 ọnwa, Supplier: Qingyun Xinmao Steel Structure Co., Ltd
Ọzọ New Project Malite Construction
site ha na 19-04-12
Ndị ahịa si South Africa gaa na ụlọ ọrụ anyị ka ha kwukọrịta gbasara ọrụ ngo nke ụlọ ọkụkọ anụ ụlọ prefab
site ha na 19-03-26